Posted by Dulmane	/ December 28, 2017
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ee lagumaysto ayaa sheegaya tacadiyo aad ubadan oo ciidanka wayaanuhu ay ugaysteen shacabka dulman ee Soomaalida Ogadenia. Warkan oo aan kahelay xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa sheegaya in ay ciidanka wayaanuhu sare uqaadeen tacadiyada shacabka waxayna udhaceen kuwii nasoo gaadhay sidan.
Warkan ayaa sheegaya in markii ay taariikhdu ahayd 15/12/17 Birqod oo Gobolka Jarar katirsan waxay ciidanka wayaanuhu ku xidh xidheen dadka kala ah
1 xaashir ow aadan
2 cabdulaahi xaashir ow aadan
3 axmed macalin cabdi (kaneeco)
4 maxamed muxumed barre
5 xabiib sh yuusuf
6 jawaahir cabdi cabdulaahi
7 cabdi raxmaan lade
8 shugri lade
9 fatxi ibraahim
10 carab cabdulaahi dhaqane
11 shugri macalim cabdi.
Warku waxa uu intaas ku darayaa in 15/12/17 Ceelwayne oo Gobolka Nogob katirsan waxay ciidanka cadawgu ku xidh xidheen
1 maxamuud dhoof cali
2 axmed caafi cali
3 cabdisanjar muxumed barre
4 saynaba caafi cali.
Isla taariikhdan 15/12/17 Dagmada Qabridahare waxay ciidanka cadawgu kuxidheen Ismaaciil Cabdi Axmed. Waxaa kale oo magaalada Jigjiga ay wayaanuhu ku xidheen Faadumo Xassan Dhagax. Isla taariikhdaas Waylalaguxidh waxay ciidanka gumaysigu ku xidh xidheen sadex muwaadin oo magacyadoodu naloogu sheegay Maxamuud axmed cumar, Isra faarax iyo Hire oo magiciisa oo buuxa aanaan haynin.
Dhanka kale 17/12/17 Kaam-daawodiid oo Dagmada Dhuxun katirsan waxaa lagu xidhay Sacda Kaamil Sh Yuusuf. Sidoo kale ayaa 19/12/17 Dagmada Xamaro ee Gobolka Nogob waxay ciidanka gumaysigu ku xidh xidheen sadex muwaadin oo lagu kala magacaabo Gorod cabdi faarax, Maxamed nuur sh cabdulaahi gadhwayne iyo Ibraahim axmed cabdi.
Waxaa kale oo 19/12/17 Daawadiid oo Dagmada Dhuxun katirsan lagu xidh xidhay dadka kala ah
1 ruqiya macalim dayib
2 dheeg kaamil sh yuusuf
3 sahra macalim maxamed
4 kaltuumo macalim maxamed
5 anfac cabdulaahi maxamed.
Isla taariikhdan 19/12/17 Dagmada Iimaybari ee Gobolka Shabeelle waxaa lagu xidh xidhay
1 cabdi gaydh daa’uud
2 sahra maxamed xassan
3 taajir cabdi dhuub
4 samsam axmed nuur.
Sidoo kale ayaa markii ay taariikhdu ahayd 21/12/17 Daawadiid oo Dhuxun karisan waxaa lagu xidh xidhay dadka kala ah
1 cabdiwali macalim cabdulaahi
2 macalim haashim macalim maxamuud
3 cali cismaan bishaar
4 kaamil sheekh yuusuf
5 cariish xaaji geelle
6 cabdulaahi cabdi
7 xaawo maxamuud cabdi
8 budul xuseen
9 mowliid ibraahim
10 macalim axmed muxumed cabdi
11 mahad maxamuud cabdi
12 cabdi sulub
13 cismaan bishaar.
Waxaa kale oo 21/12/17 Gooja oo Iimaybari katirsan lagu xidhay sheekh maxamed macalim xassan.